आमरण अनशनको ११ औँ दिन, माग अझै पूरा भएन - Aajavoli
२१ आश्विन २०७४, शनिबार २१ आश्विन २०७४, शनिबार
आमरण अनशनको ११ औँ दिन, माग अझै पूरा भएन
विभिन्न माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका नेपालका आंशिक प्राध्यापक संघको माग ११ औँ दिन बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन ।
समयमै समस्याको पहिचान र समाधानमा ढिलाइका कारण अनशनकारी डा. महेश कुमार गजुरेलको अवस्था झनै नाजुक बनेको छ । शनिबारबाट बोल्न, बस्न र आवाज सुन्न नसक्ने भएका छन् । डा. गजुरेल असोज ११ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन् ।
गजुरेलको रक्तचापमा देखिएको समस्या झनै बढेर गएको छ । केहि दिनदेखि मुटुको चाल बढी भएको, महत्वपूर्ण अंगहरु दिनप्रतिदिन शिथिल हुँदै गएको, मृगौलामा थप समस्या देखिएको र सुगरको मात्रा अत्यन्त्यै कम हुँदै गएको उनी संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
अनशनकारीको अवस्था यतिबिघ्न बिग्रदैँ जाँदापनि सम्बन्धित निकायबाट समाधानको प्रयास सम्मपनि नगरिनुले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बाटो हुँदै क्याविनेटले कुनै निर्णय नगर्दासम्म समाधान नहुने आंशिकका मुद्धामा माग पूरा नभइन्जेल अनशन नरोकिने संघले जनाएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा १४ सय २० आंशिक प्राध्यापक रहेका छन् ।
Nepal Aansik Pradyapak SangNepal GovernmentTribhuvan University
आंशिकको माग अझै सम्बोधन भएन, अनशनकारीको अवस्था झनै नाजूक बन्दै
आंशिक प्राध्यापकसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन
अामरण अनशनमा निकायको बेवास्ता
आंशिक प्राध्यापक र सरकारबिच भएको वार्ता निष्कर्शमा पुग्न सकेन
अनशनकारी डा. गजुरेलको अवस्था चिन्ताजनक
One thought on “आमरण अनशनको ११ औँ दिन, माग अझै पूरा भएन”
केलाकेटीले मागेको चिज नपाए भोकै बस्छु खादै खान्न भनेझै गरी प्राध्यापकले घुर्क्याएको सुहाएन ।
अहिलेका अांशिक प्राध्यापकहरू ३ दलका अंशियारा हुन भलै यसका केही खुपी भएकाहरू पनि होलान ।
१० वर्ष अगाडीका जुसे करारले विश्वविद्यालयलार्इ ३० वर्ष पछाडी धकेलेको छ ।
अहिलेका अांशिक प्राध्यापकमा विश्वविद्यालय टपगर्ने मध्येका ९५% ले अवसर पाएका छैनन ।
केही अपवाद वाहेक जाँचमा चिट चोरेर, कापी जाँच्ने मान्छे खोजेर, बल्खुमा सम्बन्ध भएर जेनतेन पास गर्नेहरूको भिड हो यो ।
रेक्टर म्याम अाफ्नो विषयमा अब्बल भएकाले पाटीको पुच्छर समातेर बैतरणी तरी स्थायी हुन खोज्ने यि अांशिक प्राध्यापकहरूका पक्षमा यहाँले नबोल्नुलार्इ मिडियाले गलत प्रचार गर्नु दुखद हो ।
रेक्टर म्याम दृढ रहनुहोस् ।
हामी तपार्इको पक्षमा छाै ।
फेरीपनि मरिदिन्छु भनेर धम्क्याउनेलार्इ हैन,
जुस खाएर अाउने करारबाट होर्इन,
खुल्ला विज्ञापनबाट विश्वविद्यालयका टपरहरू अाउन सक्ने परिस्थिति बनाउनुहोस् ।
पाटीका गोठाला भएका भरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नबनाउनुहोस् ।